आईफोन १३ किन्नुभयो ? यसको क्यामेरा त गज्जब छ नी , आँखा जाँच्न समेत उपयोगमा आएछ – Kantipur Press
आईफोन १३ किन्नुभयो ? त्यसका सबै फिचरहरु पनि पढ्नुभयो त ? आईफोन १३ को प्रोमा रहेको क्यामेराले आखाँ जाँच्न समेत सकिने बताईएको छ ।
हो, आईफोन १३ (थर्टीन् )प्रोमा आएको एउटा नयाँ फिचर भनेको क्यामेरामा उपलब्ध म्याक्रो मोड हो । जसमार्फत अत्यन्तै क्लोज–अपमा फोटो र भिडियो खिच्न सकिन्छ ।
यो फिचरको प्रयोग गरेर धेरै प्रयोगकर्ताले विभिन्न विषयवस्तुको फोटो खिचिरहेका छन् । तर, अमेरिकी डाक्टर टमी कर्नले भने आईफोन थर्टीन् प्रोको क्यामेरा आखाँको उपचारका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर देखाएका छन् ।
डा. कर्नले लिंकड्इनमा उनले आफूसँग भएको आईफोन थर्टीन प्रोलाई आँखाको जाँच गर्न प्रयोग गरेको बताएका छन् । उनले सेयर गरेको फोटोमा आँखा भित्रको सम्पूर्ण जानकारी देखिएको छ ।
उनले कोर्निया ट्रान्सप्लान्टको बिरामीको आँखामा देखिएको परिवर्तन फोटाेमा देखाएका छन् । यसको लागि आईफोन थर्टीन् प्रोमा रहेको म्याक्रो क्यामेरा प्रयोग गरिएको उनले बताएको विभिन्न अन्तरार्ष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।